BlazePhoto 2.0.1.1 | IT Sharing Network
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ မိမိတို့ ဓါတ်ပုံတွေကို Organize, edit, and share လုပ်လိုတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် BlazePhoto လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... ကွန်ပျူတာမှာ သိမ်းထားတဲ့ ပုံတွေကိုလျှင်လျှင်မြန်မြန် ရှာဖွေ ကြည့်နိုင်ပြီး CD, DVD တို့ဖြင့် slideshow လုပ်ကူးယူနိုင်ပါတယ်... ပုံမှာပြထားသလိုပါပဲ ဒါအပြင် rotate, flip, resize, crop, remove red eye, adjust brightness, contrast, hue, saturation in color, set blur/sharp, enhance effects, add text/clips/frame/fliter စတာတွေကိုလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်အောင် crack ဖိုင်ထည့်ပေးထားပြီး user name နှင့် email ဖြည့်ဖို့အတွက် User Info ဆိုတဲ့ ပုံလေးထည့်ပေးထားပါတယ်... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပြီး Minus, Mediafire နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ...
Additionally, this photo editor enables you to correct pictures if needed: rotate, flip, resize, crop, remove red eye, adjust brightness, contrast, hue, saturation in color, set blur/sharp, enhance effects, add text/clips/frame/fliter. With BlazePhoto, you can also share your pictures in more place: html albums, CD, slideshow DVD, export to other folder, send to friends or family by e-mail, or print out for later sharing.
BlazePhoto 2.0.1.1 (24.1 Mb)